नववर्ष २०७९ मा चम्किँदै छ यी राशिको भाग्य, तपाइको कस्तो छ ?
HomeRashifalनववर्ष २०७९ मा चम्किँदै छ यी राशिको भाग्य, तपाइको कस्तो छ ?
विश्वभरी रहेका आम नेपाली नागरिकहरू नयाँ वर्ष वि.सं. २०७९ साललाई स्वागत गर्न ब्याघ्र प्रतिक्षारत् छन् । नयाँ वर्षले सुख, शान्ति, सन्तोष, उन्नति प्रगति ल्याओस् भन्ने कामना गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा आउँदै गरेको नयाँ वर्ष २०७९ को पूर्वसन्ध्यामा सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू ज्योतिषीहरूका राशिफलले ढाकिएका छन् ।
अन्य संवत्का नयाँ वर्षमा भन्दा वि.सं.को नयाँ वर्षमा आमसर्वसाधारणहरूको रुची, चासो र ध्यान विशेष हुनुको पछाडि राशिफल पनि एउटा कारण हो । सूर्यले ३६० डिग्रीको यात्रा सकेर पुनः शुन्य डिग्रीबाट यात्रा तय गर्ने दिनबाट शुरु हुने वर्ष भएको हुनाले पनि अन्य संवत्का वर्षमा भन्दा वि.सं. को नयाँ वर्षको तात्त्विक भिन्नता र महत्त्व रहेको पाइन्छ । यस प्रकारको वैज्ञानिकता अन्य संवतका वर्षमा पाइदैन पनि ।
Previous articleकाठमाडौं मा नसोचेको घटना भयो ! कस्तो छ ६ जनाको अवस्था ? आयो यस्तो खबर
Next articleकति हुनुपर्छ उमेर अनुसारको शारिरीक तौल, थाहा पाइराखौ !